Kaftanka Maanta , Tolkaa Ubo Ku Taala , Looguma Taliyo :By Axmed Guruje | Hangool News	Home
Hangoolnews.com Kaftanka Maanta , Tolkaa Ubo Ku Taala , Looguma Taliyo :By Axmed Guruje
Sheekaba sheeko ayay keentaaye waxa la yidhi , beribaa beel soomaaliyeed oo deegan dhul u dhaxeeya ceelasha oogada iyo dhulka hawdka ayaa safar u diratay magaalada berbera xili jiilaala .
Sidii dhaqanka waagaasi ahaa , beeshaas oo ka koobnayd qoysas aad u tiro badan , qoys waliba wuxuu safarkii ku daray wuxuu islahaa waxbay kuusoo goynayaan si ay ugu soo badashaan dhuuni ay jiilaalka kagga baxaan .Rag iyo dumar intiixoog lahayd ayaana safarkii ka kaxaysay .
Intii safarki maqnaa , beeshuna raashin laadahay , ayaa hawd sarre darooro ka hilaacee, ka dibna waxa laggu soo waramay in Harro doolood roobantahay , war la helyaaba tallo ayaa la helaaye , shir baa la isugu yimi , warkan soo kordhay lagaga arinsado . Ragii shirka joogay wuxuu u batay , in beeshu raashin laadahay , safarka oo maqan hadii la guurana uu raagayo , sidaa darteed , kol hadii xooluhu aanay gaajo xun qabin , safarka la baxnaaniyo , si aan dadku u saranseermin .
Oday ragii shirka fadhiyay ka mida oo baryahaa wadaadiisa lasoo dhibaadiyay oo shaw dhawr ubo oo subagi guriga u taalo ayaa kacay markaasuu yidhi ;- Waar niman yahow cirka da’ayna waa maqasheen , xiliguna waa jilaal , dhan walbana waa laga soo guurayaa , inta safarku maqan yahay , dadku dhiman maayaane , kol ay midhaystaana waxbay cuniye aynu deegaanta ku guuro ,yaan guryaha la inooga horayne . shirkii waa la isku mari waayay , dabeetona waa laggu kala kacay .
Ninkii odayga ahaa markuu gurigiisii ku noqday , ayay islaantiisii oo loo waramay ku tidhi , hebeloow beeshu ubad yaryar bay leedahay , oo waayeel gaboobay bay leedahay , oo dad xanuusanaya bay leedahay , oo maati jiliicsan bay leedahay , dadkuna sidaada ubooyin subaga ma wada haysto , markaa tolkaa ubo subaga oo guriga kuu taala looguma taliyee , beesha ha jabinin safarku ha u yimaadee .
Imika waa halkaase Xisbigii kulmiye Ubaxa iyo dooga ku yaala , Hoteelada hargaysa ee ay ku sheekaystaan ayuun bay arkeenoo , wuxuun bay lasoo taagan yihiin , doorasho hala qabto .
13 Gobol ee abaarta awgeed lagga hayaamay , caruuraha lagaga guuray cidlada , geediga doonyaha miciinsaday iyo waayaha taaganiba uma muuqdaan .
Dee markaa waxaynu leenahay , adeerayaal hadaa hadh qabow iyo hoteelada qurxoon ku eesh-qaraarteen ,dadku naftii baa haysa , oon iyo gaajo ayaanu uliitaaye , ladnaan keligaaya dal looguma taliyo .
” sidda geed abaareed .
Inta uu gud-gude helay ,
gubad raysku jiifiyo ,
Gurma go’an ku hoos yaal ,
Adigaa gel-gelin iyo ,
Gal-xareed ah jiifoo ,
Maba ogid gu iyo dayr ,
mid la gaadhi doonee .